Turkiga oo cambaareeyay weerararo ka dhacay Soomaaaliya iyo Burkina Faso. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Turkiga oo cambaareeyay weerararo ka dhacay Soomaaaliya iyo Burkina Faso.
Turkiga oo cambaareeyay weerararo ka dhacay Soomaaaliya iyo Burkina Faso.
Dowladda Turkiga ayaa Cambaareysay weeraro geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka kala dhacay dalalka Soomaaliya iyo Burkina Faso, kuwaas oo ay ku waxyeeloobeen askar iyo Dad shacab ah.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa war kasoo baxay lagu cambaareeyay qarixii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu qaaday xarunta Taliska qeybta 12-ka Apriil oo ku taalla agagaarka Garoonka ciyaaraha Stadiom Muqdisho ee Magaalada Muqdisho.
“Waxaan ka murugeyanahay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday Xerada Ciidamada Dowladda qeybta 12-ka April ee Muqdisho,weerarkaas oo ay ku dhinteen 8 ruux tiro kalena ku dhaawacmeen, Waxaan tacsi u direynaa shacabka walaalaha ah ee Soomaaliyeed , waxaan u rajeyneynaa inuu Allah ha u naxariisto kuwa naftooda ku waayey iyo dhaqso u soo kabashada kuwa dhaawacmay ayaa lagu yiri” qoraalka kasoo baxay Dowladda Turkiga.
Previous articleCiidanka XDS oo howl-gallo qorsheysan ka fuliyay degaanno ka tirsan Gobolka Mudug.
Next articleBooliiska Puntland oo gacanta ku dhigay koox ka ganacsanaysay Khamriga.